Somalia online: 1,200 oo qaxooti Soomaali ah oo maanta dib loogu soo celiyay dalka
1,200 oo qaxooti Soomaali ah oo maanta dib loogu soo celiyay dalka
Posted on August 29, 2016RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Kun iyo labo boqol (1,200) oo qaxooti Soomaali ah ayaa maanta laga soo qaaday dalka Kenya,kuwaaso ku soo noqonaya dalkooda,sida ay xaqiijisay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR.
Waxaa lugu sheegay tiran inay ka dhigayso qaxootigii ugu badnaa oo hal maalin dalka lugu soo celinayo,kuwaaso laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Dadkaas ayaa intooda badan dhulka sii mari doona, iyagoo basas hay’addu kiraysay ku tagaya Dhoobley, halkaas oo ay safar dhulka ah ka sii galayaan, halka tiro aan sidaa u sii badnaynna ay diyaarado soo raacayaan raacayaan.
Qaxootigana ayaa ku wajahan gobollada Jubbada hoose, Gedo, Bay iyo Banaadir, waxaana Qaxootiga qaar ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay ku soo laabtaan dalkooda.
Dhowaan ayay aheyd markii maamulka Jubbaland uu sheegay Qaxootiga ku soo laabanaya Deegaanada Jubbaland in ay amni daro abuuri karaan, maadaama Shabaab laga yaabo in ay ku soo kor gambadaan Qaxootiga.